स्ववियु निर्वाचन किन ? - Nayabulanda.com
लुना अधिकारी ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार २१:१० 113 पटक हेरिएको
प्रत्येक २÷२ बर्षमा हुनु पर्ने स्ववियु निर्वाचन २०६२ साल यता धेरै क्याम्पसमा हुन सकेको छैन । पटक पटक निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अनि स्थगित हुदै १३ बर्ष बितेको छ । यस पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फाल्गुनमा स्ववियु निर्वाचन गर्ने त भन्यो । यधपी अहिलेसम्म स्ववियु निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका, कार्यतालिका आउन नसक्दा कतै स्ववियु निर्वाचन पहिला जस्तै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स हुने त हैन भन्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ ।
२०३६ सालमा भएको ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धि को रुपमा स्थापित स्ववियु हाम्रा बहादुर अग्रज योद्धाहरुले रगत र पसिनासँग साटेर ल्याएको विद्यार्थीहरुको हक, हित र अधिकार प्राप्तिको निम्ति संघर्श गरेको साझा संस्था हो । विभिन्न आन्दोलनको अग्र मोर्चामा जिम्मेवारपूर्वक नेतृत्व गर्दै अघि बढेको स्ववियु निर्वाचन समयमा हुन नसक्दा एकातर्फ शैक्षिक क्षेत्र अस्तब्यस्त बनेको छ त अर्का तर्फ सचेत विद्यार्थी समुदायको नेतृत्व विकासको ढोका बन्द हुन पुगेको छ । हरेक २÷२ बर्षमा हुनु पर्ने स्ववियु विश्वबिद्यायालयको अकर्मण्यता बिभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरुको आआफ्नै स्वार्थका कारण हुन सकेन ।
स्ववियु स्थापना देखी अहिले सम्म आइपुग्दा विद्यार्थी आन्दोलनले थुप्रै अनुभब हासिल गरिसकेको छ । यसबिचमा सरकार र विश्वविद्यालयको उदासिनता स्वयं स्ववियु मा निर्बा्िचत संगठन र पदाधिकारी का कारण सिङ्गो स्ववियु माथी नै अनेकन प्रश्न नउठेका होइनन् । केहि व्यक्ति र संगठनले गरेका गल्तिलाई सिङ्गो स्ववियु र विद्यार्थी आन्दोलनको गल्ती को रुपमा लिएर यसको आवश्यकता माथी प्रश्न उठाउनु हुदैन होला, पछिल्लो समय केहि ठाँउहरुमा स्ववियु क्याम्पस प्रशाशनसँग सौदाबाज गरेर भ्रष्टाचार गुन्डागर्दी मा संलग्न पनि भए होलान् । तर पनि स्ववियुलाइ आजको युग सुहाउदो बनाउदै लगेर विद्यार्थी हरुको हक हित र अधिकार प्राप्ती को आन्दोलन मा अगाडी लैजान सकिन्छ । सरकारलाई विद्यार्थीको अधिकार, हक, हितबारे खबरदारी गर्न पनि विद्यार्थी आन्दोलन आवश्यक छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व निर्माण गर्न स्ववियुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्रिवि सिनेटको बैठकले उम्मेदवार हुन २८ बर्ष हद लगाएसंगै धेरै नयाँ विद्यार्थीहरुलाइ थप उर्जा प्रदान गरेको छ । तर अहिले सम्म स्ववियु निर्वाचन मिति नतोकिन्दा सबै बिद्यार्थीमा निराशा छाएको छ । स्ववियु कुनै संगठनको जित र हारको बिषय मात्रै होइन । यो त विद्यार्थी आन्दोलन को नासोको रुपमा प्राप्त गरेको विद्यार्थी हरुको साझा मञ्चलाई विद्यार्थी समुदाय बाट गुम्न नदिने एउटा अबसर पनि हो । यसका निम्ती बिगत मा भएका कमि कमजोरी बाट पाठ सिक्दै आगामी दिनलाई समुदाय र शैक्षिक क्षेत्रको हितमा समर्पित गराउदै अघि बढ्नु प्रतेक विद्यार्थी संगठन र सचेत विद्यार्थीहरुको साझा कर्तव्य हो ।
शैक्षिक क्षेत्रको अग्रगति सामुदायिक हित बिगतमा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि को रक्षा गर्न स्ववियुको सान्दर्भिकता अझै पनि उत्तिकै छ । शिक्षा मा ‘नो मनि त फनफनि’ को स्थिती सिर्जना भएको छ । शिक्षामा मा भएको व्यापारिकरण को अन्त्य गर्दै सामन्य जनताको पहुँच मा शिक्षा लाइ पुर्याउन स्ववियु ले महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गर्न सक्छ ! समाज भित्रहुने गरेका सबै खाले बिकृती बिसङती कुरिती कुसंस्कार विरुद्धको आवाजलाई अझ सशक्त बनाउन स्ववियु आबश्यक छ । हामीलाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याब चाहिएको छ । ई लाइब्रेरी चाहिएको छ । २१ औं शताब्दि अनुसारको शिक्षा चाहिएको छ । सीपसहितको जनशक्ति आवश्यक छ । सबै नागरिकहरुले पढ्न पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । यी सबै विषयको लागि स्ववियु आवश्यक छ । शैक्षिक व्यवस्था, सीपमूलक शिक्षा र अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्ववियुले महत्वपू्र्ण भूमिका खेल्छ । राष्ट्रियताको सशक्त पहरेदारी गर्दै शैक्षिक क्षेत्र भित्र भएका प्रतिभा हरुको प्रस्फुटन संरक्षण र सिर्जनात्मक कार्यहरुलाई अभियान को रुपमा अगाडि बढाउन सके अझै पनि स्ववियुको सान्दर्भिकता उत्तिकै छ ।